Izimpawu Ezi-6 Sekuyisikhathi Sokucuba I-Software Yakho Yezibalo | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 9, i-2013 I-Jayson DeMers
Isixazululo sesoftware esakhiwe kahle sebhizinisi (BI) sibalulekile kunoma iyiphi inhlangano efuna ukuthola i-ROI yemizamo yabo eku-inthanethi.
Noma ngabe kulandelwa iphrojekthi, umkhankaso wokumaketha we-imeyili, noma ukubikezela, inkampani ayikwazi ukuchuma ngaphandle kokulandela izindawo zokukhula nethuba ngokubika. Isoftware ye-Analytics izobiza isikhathi nemali kuphela uma ingathwebuli izifinyezo ezinembile zendlela ibhizinisi elenza ngayo.
Bheka lezi zizathu eziyisithupha zokuyeka eyodwa analytics isoftware esivuna eyodwa ephumelela ngokwengeziwe.
1.Isixhumi esibonakalayo esididayo somsebenzisi
Ngaphambi kokuzibophezela kwisoftware ye-BI, yenza abasebenzi bakho bayihlole bese bebona ukuthi ngabe i-interface yomsebenzisi ingahlanganiswa kalula yini ekuhambeni kwabo komsebenzi. Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi singanciphisa inqubo yokubika: abasebenzi kufanele balandele indlela edidiyelwe yokuletha imiphumela. Amaqembu asebenza ngokubambisana nesoftware ye-BI kufanele abe nenqubo ecacile, engaguquguquki ukuze imizamo yabantu ingagudluki futhi ichithe isikhathi.
2. Idatha eningi kakhulu
Okunye ukuwa kwezixazululo eziningi zesoftware ye-BI ukuthi uhlelo luhambisa idatha eluhlaza kakhulu ngaphandle kokuluhumushela ekuqondeni okwenzekayo. Abaphathi nabaholi bamaqembu kufanele basheshe bakwazi ukuhlukanisa izindawo ezisebenza kahle kulezo ezidinga ukunakwa. Ebhekene nodonga lwezinombolo, abasebenzi bangachitha isikhathi esiyigugu ngokuhlanganisa imibiko engaqondakala.
3. "Usayizi owodwa ulingana konke"
Akuwona wonke amabhizinisi aqhuba ngokufana, futhi inhlangano ngayinye inamamethrikhi athile ahambisana nezidingo zayo. Isoftware ye-BI kufanele yenziwe ibe ngeyakho, ngakho-ke abaphathi bangahlunga umsindo bagxile kuwo izibalo ezibaluleke ngempela. Isibonelo, izinkampani ezihlinzeka ngezinsizakalo azidingi ukuhlola amamethrikhi ekuthunyelweni nasekuthengweni kwempahla, uma zilawula ukufakwa okubonakalayo. Izibalo kufanele zivumelane neminyango zisebenzisa imininingwane.
4. Kukhethekile kakhulu
Njengoba izinkampani zifuna uhlelo oluphelele lwe-BI, kudingeka zigweme analytics amathuluzi agxile kakhulu. Ngenkathi uhlelo lokubika lungavelela kumamethrikhi wokusebenza kwabasebenzi, kungahle kube kubi ekusingatheni ezinye izinqubo zokusebenza. Izinkampani zidinga ukwenza ucwaningo olunzulu ngezixazululo ze-BI ukwenza isiqiniseko sokuthi isoftware ayizinaki izindawo inkampani edinga ukuzihlolisisa.
5. Ukungabi izibuyekezo
Abathuthukisi be-software abathembekile bahlala njalo bethuthukisa izibuyekezo emkhathizwe oseduze, njengokulungiswa kwezokuphepha, i-OS izibuyekezo zokuhambisana, nokulungiswa kwamaphutha. Uphawu olukhulu lomuntu ompofu analytics system ukuntuleka kwezibuyekezo, okusho ukuthi abathuthukisi be-software abalungisi umkhiqizo ukuhlangabezana nezidingo zebhizinisi eziguqukayo.
Lapho kukhishwa isibuyekezo sesoftware, kufanele kuqinise ukuphepha kuzinsongo ezintsha zedijithali, futhi kugcine idatha yenkampani iphephile. Ukuvuselelwa ngokuvamile kuthuthukisa ukuhamba komsebenzi, kuvumela abasebenzi ukuthi bakhiqize imibiko ngokushesha, futhi bakhiqize imininingwane efanelekile. Kufanele uhlole amawebhusayithi wesoftware ukubona ukuthi umkhiqizo wawo uvuselelwa kangaki futhi uthole umbono wokuthi isisombululo sikhona manje.
6. Omaye bokuhlanganisa
Izinkampani zithembele ezixazululweni eziningi zesoftware, kufaka phakathi Imininingwane yeCRM, Izinhlelo ze-POS, kanye nesoftware yokuphathwa kwephrojekthi. Uma i analytics Isixazululo asikwazi ukuhlanganiswa nemvelo yakho yobuchwepheshe, uzomosha isikhathi uzama ukuletha idatha ngesandla kusuka kwezinye izinhlelo.
Izinkampani zidinga ukuqiniseka ukuthi isixazululo se-BI sihlangana kahle ne-hardware yazo ekhona, amasistimu asebenzayo, nezinhlelo zesoftware.
Njengoba izinkampani zivumelana nesikhathi sedijithali ngokulungisa izinqubo ngesivinini esiphezulu, amabhizinisi angahlala encintisana nenembile Isixazululo se-BI. Uma amamethrikhi akho amanje ephelelwe yisikhathi, enobudlabha, enesisindo sedatha engaphandle, noma umane ungaqondakali, yisikhathi sokushintshela kusixazululo esingcono.
Okuhle analytics Isixazululo singadudula inkampani ngaphambi komdlalo, iwuvumele ukuthi wamukele izinqubo ezisebenzayo, ulahlekelwe yimikhuba engasebenzi, futhi uye ngase-ROI enkulu kakhulu.
I-ShoutEm: Izinhlelo zokusebenza zeselula kanye ne-Whitelabeled Mobile Apps